Mhinduro kana yako Apple Watch isingakuudze iwe nguva yakataurwa naMinnie naMickey | Ndinobva mac
Mwedzi inoenda uye nguva dzese pandinozviona ndichifadzwa kwazvo newandaishanda naye Magüi Ojeda. Pasina nguva refu wakatora nhanho yekutenga nyowani Apple Watch mune goridhe aluminium, iyo 2mm Apple Watch Series 38. Sezvo ainayo, akafara asi izvozvo hazvimununure kubva pakuita iyo wachi inomupa kutemwa nemusoro pane dzimwe nhambo.
Mazuva mashoma apfuura akafunga kuisa watchOS yekuvandudza iyo yaaive akamirira uye chii chakamushamisa kuti kana chirongwa chose chapera wachi haina kuzivikanwa ne iPhone yake. Akanga achibatanidza neBluetooth, achibatanidza, achitangazve iyo iPhone uye HAPANA ...
Akatarisana nemamiriro ezvinhu aya, akanditsvaga kubasa ndokundiudza… Pedro! Ndiri kuda kuti undibatsire neiyi Apple Watch nekuti ini handikwanise kuwana iyo iPhone kuti izvione. Mushure mekuongorora kwakati wandei, takafunga kudzima marongero eApple Watch uye gadzira chinongedzo chitsva neiyo iPhone. Mushure meizvi, zvese zvaive zvakanaka.
Zvisinei, mazuva akati gare gare anouya kwandiri zvakare ndokundiudza kuti dial yaMickey naMinnie haina kuudza nguva yakataurwa paakadzvanya wachi. Akazviona izvi nekuti mwanasikana wake akanaka Sofía anoda kunzwa nguva yakataurwa naMinnie ... hehehe Zvakanaka, atarisana nedambudziko rakadai, Takadzika kuzoshanda kuti tizvigadzirise asi mushure mekuyedza kwakawanda hatina kuwana mhinduro.
Masikati mamwe chete iwayo, ndakagamuchira meseji kubva kune wandaishanda naye achindiudza kuti aitova nemhinduro, izvo zvakandifadza zvikuru nekuti ndakaona kuti akange akwanisa kuwana mhinduro kunyangwe ini ndakanga ndisingakwanise kuita chero chinhu. Kune izvi zvese ndosaka Ndafunga kugadzira chinyorwa kuti ndikuudze zvaakaita kana izvi zvikaitika kune mumwe wenyu.
Icho chokwadi ndechekuti iwe paunomisa sarudzo yaMickey naMinnie kuti vataure nguva yakataurwa, hazvina kukwana kuimisa paApple Watch kana muWatch application uye ndizvozvo wachi inofanira kunge yakabatana neInternet kuti ikwanise kudhawunirodha modhiyo yezwi iyo yainoisa kuitira kuti gare gare iro izwi rinonzwika kana uchimanikidza pane akati sphere. Naizvozvo, zvakaitwa naMagüi kuisa iyo Apple Watch kuchaja netambo nekunyorwa uye panguva imwechete kuisa iyo iPhone yakabatana neWiFi network. Mukuyedza kwekutanga yakanga isina mhedzisiro, saka akasarudza kudzima iyo Apple Watch uye kuibatanidza zvakare, mushure mezvo sisitimu yakadzikisa modhiyo yezwi ndokuiisa, ichiwanazve iyo inonakidza Mickey neMinnie spheres nemanzwi avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Solution kana yako Apple Watch isingakuudze iwe nguva yakataurwa naMinnie naMickey
Adrian fernandez akadaro
Kusiya iyo wachi yakabatana uye yakabatana kune imwechete network se iphone chero bedzi iri 2.4ghz bhendi kwemaminitsi makumi maviri kana hafu yeawa inogadzirisa dambudziko, zvakaitika kwandiri kekutanga uye mushure mekuita izvo zviri pamusoro, dambudziko ragadziriswa 20 kubva gumi.
Pindura Adrian fernandez
Mhoro Pedro. Semazuva ese, ichi ndechimwe chezvinyorwa zvako zvikuru. Rimwe zuva wakandiudza kuti nzvimbo nyowani dzevanyori veDisney dzaizosvika. Unoziva here kuti riini Kutsvoda kukuru. Kutsvoda
Iwe unogona zvakare kutevera iri zano kutanga usati watangazve uye kubatanidza zvakare.
Yakakwana, ini handina kuenda paChishanu chaMinnie kana Mickey uye nekungochaja wachi nekuwedzera iwo mabara zvakare, mazwi anogona kunzwikwa. Ndokutenda zvikuru